မျက်လှည့်ဆရာကြီး – ပြေ(ဆေး-၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributor, Columnist » မျက်လှည့်ဆရာကြီး – ပြေ(ဆေး-၂)
မျက်လှည့်ဆရာကြီး – ပြေ(ဆေး-၂)
Posted by kai on Nov 30, 2011 in Contributor, Columnist, Short Story | 13 comments
၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာလထုတ် မဟေသီမဂ္ဂဇင်း - ၀တ္ထုတို အဖုံး
၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာလထုတ် မဟေသီမဂ္ဂဇင်း – ၀တ္ထုတို အဖုံး
၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာလထုတ် မဟေသီမဂ္ဂဇင်း – ၀တ္ထုတို စာမျက်နှာ ၁
၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာလထုတ် မဟေသီမဂ္ဂဇင်း – ၀တ္ထုတို စာမျက်နှာ ၂
၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာလထုတ် မဟေသီမဂ္ဂဇင်း – ၀တ္ထုတို စာမျက်နှာ ၃
၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာလထုတ် မဟေသီမဂ္ဂဇင်း – ၀တ္ထုတို စာမျက်နှာ ၄
၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာလထုတ် မဟေသီမဂ္ဂဇင်း – ၀တ္ထုတို စာမျက်နှာ ၅
၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာလထုတ် မဟေသီမဂ္ဂဇင်း – ၀တ္ထုတို စာမျက်နှာ ၆
ဆရာ ပြေ (ဆေး-၂) ဆီက ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ဖေါ်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်..။
ပုံကို ကလစ်… ၂ခါလုပ်ရင်.. ဖတ်လို့ရလောက်အောင် ကြီးသွားပါလိမ့်မယ်..။
ပုံကို တစ်ခါနှပ် … တစ်မျက်နှာချင်း ပေါ်လာရင် နောက်တစ်ခါထပ်နှိပ် .. မရသေးရင် ctrl နဲ့ + ကို တွဲနှပ် .. ပြန်သေးချင်ရင် ctrl နဲ့ – ကို ပြန်နှိပ်
ဟိ ဟိ .. မကြာ မီ သူကြီး ထံ complain များ လာတော့မည်..
သူကြီးတို့ ဆီမှာ လို ချက်ခြင်းတက်နေတယ် အောက်မေ့ နေ လား
ကိုးနတ်ရှင် ကြီး က မကောင်း အပြီးအထိလည်းပါဘူး စသဖြင့် စသဖြင့် စသဖြင့်……. :grin:
သူကြီးခင်ဗျား .. comment တင်ပြီး ဘယ်လိုပြန်ပြင်လို့ ရလဲ သင်ပေးပါဦး .
ဟွန်း….။ မျက်လှည့်ဆရာက သူကြီးနဲ့ တူတယ်နဲ့တူရဲ့….။ ကားကြီးနဲ့ တပည့်ဒွေနဲ့လာပီး စားသောက်သွားတာတွေ ပိုက်ဆံမရှင်းခဲ့ဘူး…။ ဒါကိုမျက်လှည့်ပြဒါလုပ်သွားသေးတယ်…။ အဲဒိလိုပဲ…. ကျောင်းဒုံးက ခဏခဏ ခံရဖူးတော့…….။ နောက်ဆို ဘာဆိုင်ပဲထိုင်ထိုင် တစ်ဆိုင်ထဲမှာပဲထိုင်တယ်…။ ဖောက်သည်ဖစ်အောင်လုပ်ပြီး အကျွေးစာရင်းမှတ်လို့ရအောင်လို့ …။ ဟီးးးးး အရင်က အရက်ဆိုင်မှာ ကျွေးမှတ်သောက် လကုန်မှရှင်းးး အိုကေပဲ…။ ဘယ်သူမှလာပြီး မျက်လှည့်ပြလို့ မရတော့ဘူး…။ ခုတော့ ဘာဝင်ငွေမှမရှိလို့ နေ၀န်းနီတို့ ကြွေးကင်းနေတာ ကြာပါရောလား…………..
၀တ္ထု တစ်ပုဒ် ဖတ်လိုက်ရလို့ကျေးဇူးပါပဲ..ဗျာ..။
သူကြီးရေ ပြေ ဆေး2 ကိုတွေ့ချင်ပါသေးတယ်။
သူကြီးက ကျနော်အကောင့်သူကိုပေး ပြီး ဆက်ပေးလို့ရမလား။
အော်……….သူကြီးရေ….. မေ့လို့ဗျာ ခုမှသတိရတယ်…။ ဆရာပြေေ(ဆေး-၂) ရဲ့ ကွာလာလမ်ပူ အစအဆုံးဖတ်ချင်ပါတယ်…။ ဘယ်မှာရှာရပါ့…….. ။ အရင် မဟေသီထဲမှာ အခန်းဆက်ပါဖူးတယ်ဗျ………. ငွေမှင်သုတ်ခံရတာရယ်….. ကော်နဲ့ ပိတ်ကပ်ထားတာရယ် အဆုတ်ခံရတာရယ်နဲ့ အဆုံးထ်ိ မဖတ်ဖြစ်လိုက်ဖူး……………
ကြွေးဝယ်ကဒ် (ခရက်ဒစ်ကဒ်)တွေ မြန်မာပြည်ထဲ မကြာခင်ဝင်လာတော့မယ်..။
ကျွန်တော် အခုမှ ဖတ်မိတယ်
မျက်လှည့် ဆရာ မဟုတ်တဲ့ မျက်လှည့်ဆရာ အကြောင်းကို ရေးတာပဲဗျ
ဆရာပြေ ရော သူကြီး ရော ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျာ